Antaninarenina : samy nandeha samy mitady ireo nahatsiaro ny 7 febroary | NewsMada
Antaninarenina : samy nandeha samy mitady ireo nahatsiaro ny 7 febroary
Efa nampoizina ihany. Nangingina nefa koa nilamina ny fanamarihana ny tsingerin-taona fahafito ny 7 febroary 2009. Vao mainka nizara sy nivaky tanteraka anefa izany fahatsiarovana izany, omaly.
Tonga vao maraina nametraka fehezam-boninkazo teny Antaninarenina ny avy amin’ny AV7, tarihin’i Boana Jean-Pierre. « Tsy azo ekena ny hanaovana fitaovana politika ireo niharam-boina sy hanaovana sorona indray ny vahoaka. Aleo hapetraka ny fitoniana ahafahana miroso manatanteraka ny vina napetraky ny filoha Rajaonarimampianina… », hoy ny filoha lefitra, Ratsimbazafy Jean-Paul. Niara-nisakafo tamin’ny alalan’ny nofon-kena mitam-pihavanana nisintaka ny Renivohitra izy ireo taorian’ny teny Antaninarenina. Nifampiarahaba noho ny taona vaovao koa.
Nilaozan-dRajoelina any atsimo ny AV7
Taorian’izany, nametraka ny anjarany koa ny avy amin’ny HVM, tamin’ny alalan’ny filoha nasionaliny sady minisi-panjakana, Rakotovao Rivo. Narahin’i Monja Roindefo izany. Nisesy taorian’ireo ny Mapar notronin’ny AV7 andaniny, tarihin’Andriamahefasoa Etienne. « Tsaroana anio ireo maritiora. Fa misy martiora koa any atsimon’ny Nosy noho ny kere ka lasa any ny filoha Rajoelina, nijery izany. Mbola fitiavan-tanindrazana izany », hoy ny mpandrindra ny Mapar, Razanamahasoa Christine, taorian’ny vavaka fohy nataony.
Tonga koa Ramaroson Alain ary namarana ny fametrahana ny fehezam-bonikazo ny depiote Rossy.
Vitsy tanteraka ireo nanoina ny antso tamin’ity fahatsiarovana indray mitoraka ity. Zary lasa fombafomba fotsiny sy efa nahazatra fa tsy hita taratra ilay tena fahatsiarovana iny raharaha iray teto amin’ny firenena iny. Natao ho fieboeboana sy nisehosehoana mba ho hita fotsiny ny an’ny depiote sasany. Ny tena mpitarika rahateo, tsy teo ary efa fanindroany izao. Misy dikany sy antony ?
Efa notsarain’Antananarivo Ravalomanana
Etsy andaniny, tombanana fa anisan’ny nahatonga izany fahavitsian’ny olona na koa ny tsy firaikana intsony amin’ny fahatsiarovana ny 7 febroary izany ny tsy fahitana ny vokatry ny « Tolona » sy ny tsy fisian’ny ambara fa « Fanovana ». Nahatsiaro tena ho voafitaka koa ny sasany ? Efa nirosoana koa anefa ny dingana samihafa tato ho ato. Teo ny fampihavanam-pirenena. Fa teo koa ny efa nitsaran’ny vahoakan’Antananarivo ny tantaran’ny 2009 tamin’ny alalan’ny fifidianana natao teto. Ireo vahoaka anetsiny teny amin’ny kianjan’ny 13 mey sy tamin’ny 26 janoary ary koa ny 7 febroary ihany no nifidy an-dRavalomanana na ny olony. Voaporofo izany fa nandresy hatrany ary amin’ny elanelam-bato lavitra ny Dr Robinson teto Antananarivo tamin’ny fifidianana indroa miantoana ny taona 2013. Tahaka izany koa tamin’ny fifidianana depiote. Laharana voalohany hatrany ny depiote Tim. Mbola lasan’ny vadiny, Ravalomanana Lalao, koa ny fitantanana ny Renivohitra na vitsy aza ireo nifidy.
Midika izany fa efa notsarain’ny vahoaka Ravalomanana sy Rajoelina raha eto Antananarivo, manoloana ny « Raharahan’ny 2009 » .